Dhageyso;Waaliga Hiiraan Oo Ka Hadlay Goob Fagaara Ah Xilli La Sheegay In Duqeyn Lagu Dilay. – Calamada.com
Dhageyso;Waaliga Hiiraan Oo Ka Hadlay Goob Fagaara Ah Xilli La Sheegay In Duqeyn Lagu Dilay.
calamada March 10, 2016 2 min read
Waaliga WI Hiiraan Shaykh Maxamed Mire ayaa galabta fagaare ku yaalla degmada Buq-aqable kala hadlay boqolaal dadweyne ah oo u soo daawasho tagay fulinta xukun riddanimo oo lagu fulinayey askari ka tirsanaa Murtadiinta.
Xukunkan ayaa lagu riday nin lagu magacaabo Kun-ciil Mahad oo ka tirsanaa askarta kooxda ridada Soomaaliya, waxaana Maxkamadda ay sheegtay in uu qirtay fal-dambiyeedka lagu soo oogay.
Waaliga WI Hiiraan oo la hadlay dadweynaha ayaa sheegay in cadowga waayadii dambe uu bilaabay in uu adeegsado awoodiisii ugu dambeysay oo ah duqeymaha xagga cirka ka dib markii uu ku fashilmay dagaalkii xagga dhulka ee ay kula jiraan Mujaahidiinta, wuxuuna tilmaamay in uu soo afjarmi doono duulaankooda Inshaâ€™Allaah.
Waaliga ayaa soo hadal qaaday duqeyn dhawaan cadowga uu ka fuliyey wilaayada Hiiraan taas oo uu sheegay in cadowga uu ka bad-badiyey, islamarkaana uu ka been sheegay qasaaraha ka dhashay taas oo uu tilmaamay in ay qeyb ka tahay beenta iyo dacayaadka lagu yaqaano gaalada.
Wuxuu sheegay in isaga uu ka mid ahaa dadka uu cadowga sheegtay in ay ku dileen duqeyntaas, islamarkaana ay ku guuldareysteen faafinta been abuurkii ay wadeen.
â€œWaxay sheegteen in ay dileen dad badan oo gaaraya ilaa 150 ruux, dadka ay sheegeen in ay dileen aniga ayaa ka mid ah oo hadda hortiina taagan, Marka taasi waxay qeyb ka tahay beenta lagu yaqaano cadowgaâ€ ayuu yiri.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu shaykh Maxamad Mire sheegay in cadowga mudooyinkii u dambeeyey uu adeegsanayey Maleeshiyaad iyo Jawaasiis uu u isticmaalayo dagaalka uu kula jiro Mujaahidiinta, wuxuuna ku goodiyey in Mujaahidiinta ay madaxa ka jabin doonaan qof waliba oo cadowga ku saacido dagaalka uu kula jiro Islaamka iyo Muslimiinta.
Halkaan Ka Dhageyso Kalimadda Sheekh Muxamed Mire.
Halkaan Ka Dhageyso Qaadiga Oo Ku Dhawaaqaya Xukunka.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 01-06-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 02-06-1437 Hijri.